IHuawei inyusa ukuthengisa kwayo ngama-50% kwikota yokuqala | I-Androidsis
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwatyhilwa ukuba USony utyikitye eyona ntengiso yakhe imbi kwikota yokuqala yonyaka. Ukongeza, i-Samsung ayikawuqalanga unyaka ngeenyawo zasekunene, kuba ifemu yaseKorea ibonise ezinye iziphumo ezibi kakhulu. Kule nto kufuneka kongezwe ukuhla kwintengiso, eshiya inkampani ineemvakalelo ezimbi. Le meko yahluke mpela kwiHuawei, oqale unyaka kakuhle kakhulu.
Umenzi waseTshayina ivala ikota yokuqala yalo nyaka ngokunyuka okuphawulekayo kwintengiso. Ngale ndlela, uHuawei uyaqhubeka kunye nomoya ofanayo nonyaka ophelileyo, evaliweyo ngokunyuka kwama-37% kwintengiso.. Yintoni ebenza basondele ngakumbi kwi-Samsung kwintengiso.
Iiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwakusele kukho intetho yokuba ukuthengisa kwegama laseTshayina yayinyuke ngama-50%, njengokuba inkampani yayiqhakamshelana nayo. Ngoku ekugqibeleni sinamanani okuthengisa ngqo eHuawei, Ukongeza kwezinye iimveliso. Enkosi kubo sinokubona ukutsiba okumangalisayo okwenziwe luhlobo lwaseTshayina kwimarike.
1 I-Huawei idibanisa kwindawo yesibini
2 IHuawei inyusa ukuthengisa kwayo
I-Huawei idibanisa kwindawo yesibini
Kunyaka ophelileyo uHuawei ukwazile ukugqitha iApple njengomenzi wesibini othengisa kakhulu kwihlabathi. Into ephindaphindwayo kwakhona, iyenza icace into yokuba uphawu sele luzisekile kwesi sikhundla. Isamsung ihlala iyinkokheli yentengiso, kunye nesabelo sentengiso se-23,1%, nangona belahlekile umhlaba xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Into uphawu lwesiTshayina oluye lwakwazi ukuyisebenzisa, ngoku ngesabelo sentengiso se-19%, sisondela kwaye sisondela.
Ngale ndlela, iApple iya isiba kude neHuawei. Uphawu lwaseMelika lwanelisekile yindawo yesithathu kule kota yokuqala, ngesabelo sentengiso se-11,7%, Oko kubonisa ukwehla okuphawulekayo xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Ukongeza, ngale ndlela, iimveliso ezinje ngeXiaomi, Vivo kunye ne-OPPO, ezivala uluhlu, zisondela kancinci.
Into enomdla kukuba ngaphandle kweHuawei kunye neVivo, ezinye iimveliso ziye zavala ikota yokuqala yonyaka ngokuhla kwentengiso. UXiaomi unikezele ngomhlaba othile, nangona ingoyena unciphise okuncinci kwintengiso. Ngokuchasene noko, sinetyala lika-Apple, lelona liwele kakhulu. Ukuthengisa okungalunganga kwesizukulwana sayo samva nje se-iPhone kugcina uphawu lukude kwindawo yesibini kwintengiso.
IHuawei inyusa ukuthengisa kwayo
Njengoko kuxeliwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, ukuthengisa kukaHuawei kuqhume kwikota yokuqala ye-2019. Kwangelo xesha linye kunyaka ophelileyo, umatshi waseTshayina wathengisa ii-smartphones ezizigidi ezingama-39,3 kwihlabathi liphela. Ukuthengisa ababekwindawo yesithathu kwintengiso. Kunyaka kamva imeko itshintshile, kuba ngoku bavala iifowuni ezizigidi ezingama-59,1 ithengisiwe, njengophawu lwesibini.
Ukongeza, umgama wayo ovela kwi-Samsung uphawulwe ngokufutshane. Kunyaka ophelileyo uphawu lwaseKorea luthengise iifowuni ezizizigidi ezingama-78,2 kule kota yokuqala. Ngelixa Kwi-2019 ukuthengisa kwayo kwehle kwi-71,9 yezigidi zeefowuni. Kukuwa okuncinci, kodwa kubonisa ukuba banikezele ngomhlaba othile kwintengiso malunga noku. Nangona inkampani ngokwayo sele ikwenzile kwacaca ukuba balindele ukonyuka kwentengiso kwikota yesibini.
Kuya kuba ngumdla ukubona indlela ukuthengisa okuvela ngayo kwiinyanga ezizayo. U-Huawei sele watsho ukuba phakathi kwe-2019 kunye ne-2020 isenokuba ziinkokheli zentengiso yemfonomfono. Ngelixa i-Samsung igcina ukuba ngabo abaya kuba ziinkokheli, nakwiminyaka eli-10 ezayo. Ke idabi lokufumana indawo yokuqala kwintengiso lithembisa ukuba liya kukhuphisana ngokushushu. Siza kubona ukuba kwenzeka ntoni kule kota yesibini yonyaka. Ngokukodwa ngoku njengoko la mabanga mabini aphakamileyo, i-P30 kunye neGPS S10, sele zithengiswa kwihlabathi liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Ukuthengisa kukaHuawei kuyenyuka kwikota yokuqala
I-Facebook ityhila into entsha kuMthunywa kwi-2019